Rarama SeMunhu Anoziva Kuti Akaropafadzwa
"Taura naAroni navanakomana vake, uti: Munofanira kuropafadza vana vaIsiraeri nomutoo uyu. Muti kwavari: Jehovha akuropafadze, akuchengete" (Numbers 6:23-24).
Isu tiri Vakristu. Hupenyu hwedu hwakaropafadzwa. Tinotarisirwa kuti tirarame nemaropafadzo aya. Ndiwo atinofanira kugara tichitaura. Maropafadzo ndiwo anofanira kuvonekwa patiri. Anofanira kuvonekwa patiri nguva dzose. Gara uchitaura maropafadzo. Mataure paunopinda mumba mako. Mataure paunosvika kubasa kwako. Mataure uri kuchikoro. Mataure paunosangana nevamwe. Izvi zvinozoita kuti uve munhu anoshamisa! Bhaibheri rinotikurudzira kupa maropafadzo. Iri rinotova basa ratakapiwa. Izvi ndizvo zvatinovona muna 1 Petro 3:9.
Izvi ndizvo zvakarairwavo Aroni nevana vake. Mhuri yaAroni ndiyo yaiva mhuri yevaprista. Jehovha vakavaraira kuti vataure maropafadzo. Vaifanira kuataura kuvana vaIsraeri. Vana vaIsraeri ava vakanga vari vanhu vaMwari. Asi vaprista vaifanira kutaura maropafadzo kwavari zvakadero. Ndiko kusaka vaJudha vari vanhu vakabudirira chaizvo. Panyika hapana rumwe rudzi rwakabudirira savo. VaJudha ava vanoziva kuti vakaropafadzwa. Saka vanorarama sevanhu vakaropafadzwa. Vanodzidzisa vana vavo kutaura maropafadzo. Vanovadzidzisa kuti ivo vanhu vakaropafadzwa.
Ikozvino kwava neKereke. Kereke iyi ndiyo ine zvisikwa zvitsva. Yakaropafadzwavo. Maropafadzo ayo anodarika akapiwa vaJudha. Asi vazhinji havana kudzidziswa izvi. Havazivi kuropafadza. Havazivi kuti maropafadzo anogamuchirwa sei. Saka maropafadzo haavonekwi pahupenyu hwavo. Mumwe munhu angataura achiti, "Mwari vakuropafadze". Vamwe vanhu vanofunga kuti aya anongova mashoko hawo. Vanoavona semashoko anongotaurwa kuchechi. Havamakoshesi. Asi kune vamwe vanonzwisisa zvinhu zvepamweya. Saka vanonzwisisa mashoko akadai. Mashoko anomutsa maropafadzo. Mashoko edenga.
Vana vaIsraeri vakanga vakaropafadzwa. Asi Mwari vakaraira Aroni nevana vake kuti varopafadze vaIsraeri ava. Sei Mwari vakaraira izvi? Munhu anogona kunge akaropafadzwa. Asi maropafadzo aya anofanira kumutswa. Mashoko ekuropafadza ndiwo anomutsa chiropafadzo ichi. Ndiwo anoita kuti chiropafadzo ichi chishande. Mwari vakaudza vaprista mashoko chaiwo ekutaura. Vaifanira kutaura mashoko aya vachiropafadza vaIsraeri. Tinoaverenga muna Numeri 6:24-27. Dzidza mashoko aya. Fungisisa pamusoro pawo. Madzeye mumweya mako. Vaprista vachiri kutaura mashoko aya kuvaIsraeri. Ndiko kusaka vaIsraeri ava vachibudirira muhupenyu hwavo.
Rarama semunhu anoziva kuti akaropafadzwa. Ungava muchechi. Mushumiri waMwari angatandavudza mavoko ake kugungano. Angataura maropafadzo. Gamuchira maropafadzo aya. Magamuchire mumweya mako. Maropafadzo aya anenge ari kubuda mumavoko emushumiri uyu. Anenge ari kubuda mumashoko ake. Ndizvo zvinoita maropafadzo. Maropafadzo angataurwa kwauri. Mashoko aya anenge aine simba. Ndiwo anotungamirira hupenyu hwako. Ndiwo anoita kuti ugone kurarama hupenyu hwawakarongerwa naMwari.
Ini ndiri Mwana wedzinza raAbrahama. Maropafadzo aAbrahama ari pahupenyu hwangu. Ndakaita semuti wakasimwa parwizi. Ndakadiridzirwa zvakakwana. Ndinogara ndichifashukira. Ndinobereka michero yekururama. Ndakagurirwa minda pavhu rakanaka. Ndinobudirira zuva rimwe nerimwe. Ndakafuma. Ndinokunda zuva rimwe nerimwe. Hareruya!